Amarka xadidaya caagaga cusub ayaa imanaya!
Afhayeenka Komishanka Horumarinta iyo Dib-u-habeynta Meng Wei ayaa sheegay 19-ka in 2020-ka, dalkaygu uu hormuud u noqon doono mamnuucida iyo xaddidaadda wax soo saarka, iibinta iyo isticmaalka qaar ka mid ah wax soo saarka caagga ah ee gobollada iyo aagagga qaarkood. Waxay tiri sida ku cad "Fikradaha ku saabsan Wadada Dheeraadka ah ...
Dayactirka qalabka Spring Festival
Martida qaaliga ah ee mashiinada Chengda, waad salaaman tihiin Fasaxii sanadlaha gu'gii ee guga ayaa soo dhowaanaya Si loo hubiyo in mashiinkaaga warqadda koobka uu si caadi ah u shaqeyn karo fasaxa ka dib, waxaan halkan kugu xusuusinaynaa inaad sameyso dayactirka soo socda: 1: Mashiinka Koobka warqadda Chengda ee loo adeegsaday in ka badan ...
Jadwalka sanadka cusub, casriyeynta tikniyoolajiyadda
Si si fiican loo siiyo shirkadaha soo saara weelka waraaqaha waxsoosaarka ay la jaan qaadayaan teknolojiyadda mashiinka ee maanta samaysmaya, shirkaddayada Haining Chengda Machinery Co., Ltd. waxay bilawday inay casriyayso dhammaan taxanaha mashiinnada samaynta weelka waraaqaha ah. Mashiinka wax taaj oo kale la soo saaray hadda ha ...
Waxaan kugu arki doonaa Wuhan bisha Sebtember
Annaga, Haining Chengda Makiinado Co., Ltd. waxaan kaqeyb galnay 19-kii Shiinaha ee Caalamiga ee Farsamada iyo Alaabada Korantada ee Wuhan laga soo bilaabo Sebtember 06 ilaa 09, 2018. Lambarka bandhiggeena: Hall B4 4T33. Bandhigan, kaliya kuma qaban doonno mashiinka ugu dambeeya ee warqad koob xawaare dhexdhexaad ah 130 / min ...
R & D asalka mashiinka daboolka warqadda ah
Sanado badan, dhamaan cabitaanada sida qaxwada, shaaha, jalaatada, iwm waxaa lagu keydiyaa koobabka balaastikada ah iyo koobabka warqadaha. Daboolka weelka guud ahaan waxay isticmaalaan daboollo balaastiig ah oo hufan oo tarjumaya. Daboolladan balaastigga ah waa la iska tuuri karaa, in kasta oo ay leeyihiin qaabab aad u shaqsiyeed. Waxaa jira enviro ...